Heart Museum: ပျောက်ဆုံးသွားသော အိပ်မက်မြစ်
သာယာလှပတဲ့ လောကနိဗ္ဗာန်ကို စိတ်ကူး
ဘ၀ဆိုတဲ့ အတိတ်ကဖောင်ကို ...ငါ ဖျက်ခဲ့တယ်။
အနာဂတ်လှေလေး ငါရှေ့တိုး လှော်ပေမယ့်
ဟိုးးးးးး တချိန်က အိပ်မက်လေး ကွဲရှ
ခါးသီးမှုတွေကို မြိုချ ငါဆက်ကရအုံးမယ်။
ရင်ခုန်သံမှန်နေသ၍ လေနုအေးလေး ရှုနေသ၍ပေါ့လေ.........
Posted by Heartmuseum at 8:52 AM
အမယ် ပျောက်နေတုန်းမှာ ခံစားချက်တွေ ရေလည်ပေါက်ကွဲနေပါလားးးး လေနုအေးတွေ အမြဲတိုက်နေပါသေဗျာ ပုံက ဘာမြစ်လဲ အစ်ကို သံလွင်လား စစ်တောင်းလား ဧရာဝတီလားး :)
“ရင်ခုန်သံမှန်နေသ၍ လေနုအေးလေး ရှုနေသ၍” ဆိုတာလေး အရမ်းသဘောကျမိပါတယ် ကိုအညတရရေ။ ပြန်လာပြီဆိုတော့ ၀မ်းသာလည်းမိပါတယ်။
ကဗျာ လာဖတ်သွားတယ်။ ကောင်း၏။ ဒါကြောင့် `ဟ´ ကို ပြတိုက်ထဲမှာ ထားလိုက်တာကိုး...
တော်ဘီ ခင်လေးတော့ လေနုအေးလေးရှုပြီး ဖဲဘဲသွားရိုက်တော့မယ်..။
ကဗျားလေး လာခံစားသွားတယ်။ လေနုအေးလေးရှုပြီး ဧရာဝတီကိုမြင်ယောင်မိတယ်။
အိပ်မက်မြစ်က ကိုယ့်ရှေ့မှာ ရှိနေတာ မဟုတ်သေးပေမယ့် စီးဆင်းနေဆဲ..
ဘုရင့်နောင်လို နှလုံးမူတယ်လို့ ပြောထားလို့.. ဘုရင့်နောင်က ဘယ်လို နှလုံးမူလို့လဲဗျ. ကျွန်တော် မသိလို့ မေးကြည့်တာ.
ဘ၀ဆိုတဲ့ အတိတ်ကဖောင်ကို ငါဖျက်ခဲ့တယ်....
ရင်ခုန်သံမှန်နေသ၍ လေနုအေးလေး ရှုနေသ၍ပေါ့လေ.
အဲဒီစာသားလေးတွေ အရမ်းကြိုက်တယ် ဂွတ်တယ်
ကြောင်ရေ.... မူးမြစ်ဟ.... မူးမြစ်....
လေနုအေး.... မရှုရင် တာ့တာပြမှာပေါ့.... ဟေးးးဟေးးး
ကိုလူလကြီး ဟက ပြထားမှ ကောင်မလေးတွေ မြင်မလားလို့....D:
ကိုရင် တအိမ်လိုလား.... ဘေးထိုးတော့ ရတယ်ဟုတ်... ဧရာဝတီကို လွမ်းတဲ့စိတ်နဲ့ရေးထားတာ ဧရာကို မြင်ရင် ၀မ်းသာတယ် Target ကိုမြင့်လို့ လားရှိုးသူရေ....Thank u.
Kyarlay ရေ... နောင်ရိုးတိုက်ပွဲကို ဆိုလိုတာပါဗျာ...
ကိုမိုးမြင့်ကြီး..... အောက်ခြေလွှတ်နေပါတယ်ဆိုမှ မြှောက်နေပြန်ပြီ..... မိုးထိအောင် လှေကားထောင်လိုက်မယ်...D;